Ahoana no famafana ny mombamomba ny Netflix? | la-manette.com
22 février 2021 feh Claude henrichon
Aoka ho marin-toetra, isika rehetra dia tia mijery votoaty ao mivantana ao amin'ny Netflix indraindray. Na momba izany sarimihetsika seho malaza na mahatalanjona, ny votoatin'ny Netflix dia ampahany manan-danja amin'ny fiainantsika. Ho fanampin'izay, azo inoana fa iray amin'ireo endri-javatra tsara indrindra amin'ny goavambe streaming ny fahaizany mamorona mombamomba marobe.
Afaka mamorona profil hatramin'ny dimy ao amin'ny Netflix ianao ary manome azy ireo anarana mahazatra araka izay ilainao. Tena ilaina ity fiasa ity rehefa mizara kaonty amin'ny namanao na ny namanao ianao family. Ny mombamomba tsirairay ao amin'ny Netflix dia manana ny tantaram-pijerena sy ny tolo-kevitra. Amin'ity lohahevitra ity dia azonao atao ny mijery ny mpitari-dalana anay Ahoana ny fanesorana ny tantaran'ny fijerena Netflix.
Tsy izany anefa no lohahevitra mahaliana antsika ankehitriny. Eritrereto hoe namorona profil maro tao amin'ny Netflix ianao. Amin'izao fotoana izao, vitsivitsy amin'ireo namanao no nividy ny famandrihana azy (tena tsy azo inoana, fa mitranga izany). Noho izany dia tsy azonao ampiasaina ireo mombamomba marobe noforonina.
Manontany tena aho hoe ahoana no hamafa ny mombamomba an'i Netflix? Dia tonga amin'ny toerana mety ianao. Hanampy anao izahay hanaisotra ireo mombamomba fanampiny ao amin'ny kaontinao Netflix amin'ny navigateur web sy finday.
Ahoana no famafana ny mombamomba Netflix amin'ny navigateur web?
Ny ankamaroan'ny olona amin'ny ankapobeny dia tia mihinana votoaty Netflix amin'ny desktop na solosaina findainy. Mba hanaovana izany dia mila kaonty tranonkala Netflix ianao. Raha mampiasa kaonty toy izany ianao ka te-hamafa ny mombamomba anao dia araho ireto dingana manaraka ireto:
Vakio ihany koa: Call of Duty: Warzone - Adler Intel: Ahoana no hahitana sy hahitana ny fifanarahana Adler rehetra
1. Midira ao amin'ny kaontinao Netflix
2. Mandehana any amin'ny kisary mombamomba anao eo amin'ny zoro havanana ambony ary safidio ny "Manage Profiles".
3. Fidio ny mombamomba tianao hofafana.
4. Tsindrio eo amin'ny "Delete profil" ary hamafiso fa te-hamafa ny mombamomba amin'ny alalan'ny fisafidianana ny "Delete profil" safidy indray.
Ahoana ny famafana ny mombamomba ny Netflix amin'ny finday?
Raha toa ahy ianao, kamo loatra mijery sarimihetsika amin'ny solosaina finday ary aleony mandefa azy amin'ny findaiko, azonao atao ny mamafa profil fanampiny amin'ny findainao.
1. Sokafy ny fampiharana Netflix amin'ny fitaovanao
2. Safidio ny safidy "Edit" eo amin'ny zoro ambony havanana.
4. Peho ny "Delete" safidy sy hanamafy amin'ny fipihana ny "Eny" safidy.
Izany no ho an'ity lahatsoratra ity; manantena izahay fa nahasoa anao ity torolalana ity. Aza misalasala mampahafantatra anay ny hevitrao ao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra etsy ambany.
Ny fampiharana tsara indrindra ho an'ny lalao PC rehetra tokony hampiasaina
Ny lalao board nomerika Pandemic dia nesorina tamin'ny fivarotana noho ny olana momba ny kalitao sy ny fahatokisana
Ligy Rocket Sideswipe leaderboards - nanazava ny rafitra filaharana